मुल गेटमा पनि भित्रवाट साँचो तर घर बाहिर कसरी पुग्यो शव ? - साँचो खबर Online Khabar
मुल गेटमा पनि भित्रवाट साँचो तर घर बाहिर कसरी पुग्यो शव ?
असार २८, काठमाडौ । झापाको बिर्तामोडमा सोमवार बिहान आफ्नै डेरा अगाडि युवती मृत फेला परेको घटना रहस्यम देखिएको छ ।
बिर्तामोडस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्प उत्तर बिर्तामोड–५ मा आफन्तसँग डेरा बस्दै आएकी २५ वर्षीया सृजना बस्नेतको शव अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको हो ।
उनी आमा दाई भाउजुसंग भाडाको कोठामा बस्दै आएकी थिइन् । घरको चौथो तलामा बस्ने युवतीको शव कसरी कोठाकै तल अर्धन ग्न अवस्थामा ल्याइयो भन्ने आशंका प्रहरीलाई उब्जाएको छ । उनी बसेको प्रत्येक तलामा चावी लगाइएको छ भने घरको मुल गेटमा पनि भित्रवाट साँचो लागेको छ । चार तले घरको माथिल्लो तलामा बस्ने ती युवतीको शरिरमा भित्रि कपडा मात्रै छ । पेन्टी घोँडा मा देखिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
तर युवतीको शव भने उनी बसेको कोठाको तल बाहिर अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको हो । घटना निकै रहस्यम देखिएपछि प्रहरीले कुकुरको सहायतामा अनुसन्धान थालेको छ । अनुसन्धानका लागि झापा प्रहरीले कुकुर मगाएर अनुसन्धान थालेको हो । कुकुरसँगै चिकित्सकले समेत घटनास्थलको अध्ययन गरेका छन् ।